Xildhibaan Fiqi: Villa Somalia waxa ay dagaal ku haysaa saddex qolo | Wardoon
Home Somali News Xildhibaan Fiqi: Villa Somalia waxa ay dagaal ku haysaa saddex qolo
Xildhibaan Fiqi: Villa Somalia waxa ay dagaal ku haysaa saddex qolo
Xildhibaan Axmed Macallin Fiqi ayaa ku eedeeyey Villa Somalia in cidda kaliya ee ay dagaalka ay kula jirto ay tahay dadka siyaasad ahaan aan raacsaneyn, kuwaas oo uu ku sheegay saddex dhinac. Qoraal uu Fiqi soo dhigay facebook, hoos ka aqriso.
Madaxda Villa Somalai tan iyo intii meesha ay yimaadeen waxey wadaan saddex dagaal:
1. Dagaal ka dhan ah dawlad goboleedyada
2. Mid ka dhan ah madaxdii dalka Soo xukuntay iyo siyaasiyiinta ka aragtida duwan iyo mid.
3. Dawlado saaxiib la ahaa Somalia iyo hey’adaha caalamka qaarkood ay ku qaadeen.
Alshabaab iyo Daacish oo umadda Soomaaliyeed laynaysa wax dagaal ahi illaa iyo hadda laguma qaadin, mana muuqato In olole noocaas ah uu socdo!!
Shaqada ugu weyn xafiiska Madaxweyne Farmaajo waa dacyaadaynta iyo aflagaadaynta madaxdii asaga ka horaysay ama siyaasiyiin qaabka uu wax u maamulayo kaga aragti duwan, illaa iyo goormee ayay soconaysaa In lacagtii qaranka loo adeegsado aflagaadayn iyo xadgudubyo madax hore.
Video-gii shalay baraha bulshada la Soo geliyey ee jacburka ahaa, waxey u muuqataa In lagu daboolayo shirka shidaalka Soomaaliya lagu xaraashayo ee London ka dhacaya maalinta khamiista 07 Febraayo. Caqli noocee ah ayaa lagu sheegi karaa inuu ku jiro qolo waxey madaxdii hore ku dacaayadaynayaan wax ka xun ayagu gacanta kula jira.?!
Soomaalida UK iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed waxaa la gudboon In si weyn looga hortago shirka aan sharciga ahayn ee khayraadka Soomaaliyeed sida raqiis ah loogu xaraashayo.
Previous articleDaabicida Baasaboorka Soomaaliga oo muddo labo bilood xayiran iyo dad badan oo dhibaato la soo deristay
Next articleDAAWO:-Muuse Biixi “Farmaajo maalintii la doortay illaa maanta cunaqabateyn ayuu nagu hayaa”
DAAWO:- Madaxweyne Farmaajo “Aniga Waan idin cafiyay adinkana i cafiya
Ciidanka Dabageed iyo Cali Jayte oo weeraray kuwa badbaado Hiiraan